Maxaan ku sameyn karaa liiska alaabooyinka ku saabsan Amazon.com ee horumarinta darajada?
Marka ay timaado qaadashada faa'iido lacageed oo aan laga badnayn Amazon.com iyo darajada hogaaminta horumarka dheeriga ah, qaabka qarsoodiga ah ee guulaha ayaa lagu daboolayaa raadinta alaabta macaamiisha ah ee nool. Waxaan ula jeedaa in aan ka hor tago ciyaarta on Amazon.com leh darajo loo arko xagga sare ee saldhigga suuqa - dhammaan waxa aad u baahan tahay waa si buuxda u hagaajineysa liiska alaabtaada. Hase yeeshe, khiyaamadu waa in wax kasta oo meel ku yaal ay tahay inaad ogaato waxa saxda ah iyo meesha si gaar ah loo qabto mar kasta oo aad soo gudbinayso wixii isbeddel ah ee taxanaha. Halkan waa sida aad u sameyn kartid - isticmaal buug yarahan soo socda si aad uhesho diiradda saxda ah bilowgii hore, adigoon lumin xitaa daqiiqad wakhti qaali ah ama dadaal aad u yar.
Haddii aad horay ujoogtay Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO), waa inaad haysataa SEOs xirfad sare leh dheh, content waa had iyo jeer boqorka. Waxaan u maleynayaa in laga yaabo in wax kasta oo qoraal ah laga yaabo in laga helo bogga intarnetka waa sida caadiga ah ee loo yaqaan 'optimization' si loo helo aragtida internetka ee loo baahan yahay. Wax kasta oo si habboon ufilmaameedka ah oo la isku qurxiyo ayaa ka imanaya isticmaalka caqliga leh iyo meeleynta saxda ah ee ereyada muhiimka ah. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad aragto liiska aad u fiicnayd ee liiska Amazon.com iyo natiijooyinkaaga ku guuleysiga qaadashada qaadashada lacagta - adigoo qabta cilmi-baaris guud oo muhiim ah waa in aad noqotaa lambarka talaabadaada.
cilmi-baarista muhiimka ah
Sidaas darteed, aynu wajahno - oo leh xulashada erayo doorasho oo si wacan u dhisan ayaa aad muhiim u ah si aad u sameyso liis gareyntaada alaabtaada Amazon.com dusha sare ee dukaameysiga nool. Taasi waa sababta ay ufududaynayso cilmi-baaris-muhiim ah oo aan faa'iido lahayn iyada oo aanad waqti badan qaadin, waxaan ku talineynaa isticmaalka mid ka mid ah qalabka raadinta ee soo socda: Qorshaha Keyword Key Google (bilaw wanaagsan oo leh fasallo wanaagsan oo soo socda oo bilaash ah oo lacag la'aan ah oo leh faa'iidooyin quruxsan -Kadib inaad dooratid midka ugu fiican ee aad jeceshahay oo dhan, sida qalab kastoo loo cayimay waa mid la isku halleyn karo loona adeegsan karo KeywordTool.io ).
Maxay tahay sababta aad ugu bilaabi laheyd gaar ahaan Qorshaha Qorshaha Kelmadaha (Keyword Planner Tool) by raadinta aduunka ee raadinta, oo kaliya ka dibna sii wado qaadashada kale, si gaar ah loogu talagalay caawiye caan ah? Si fudud sababtoo ah marka ay timaado Qodobbada Aasaasiga ah ee ugu muhiimsan - waxaa loola jeedaa in si toos ah loo muujiyo muuqaal cad, tusaale ahaan sheyga alaabooyinka, sharaxaadaha, qodobbada ku saabsan badeecada, iwm.
Ereyada Qarsoon - ma jiro wax maskax ahaan Nooca ugu muhiimsan, kuwaani waxay ku jiraan tusaalooyinka caadiga ah, tusaalooyin kala duwan oo ku saabsan sida loo yaqaan 'keywords' oo ka mid ah xitaa xitaa xitaa xitaa ujeedo qalad ah, taas oo loo adeegsaday jargon warshadaha - sidaa daraadeed sababta qaybta ereyada muhiimka ah uma ekaan karto in lagu daro, tusaale ahaan magacyada rasmiga ah
Qorista Farsameedka Amazon.com ilaa D rive Your Rank
Marka baaxada weyn ee ereyada muhiimka ah ee la doortay waa diyaar, waa wakhti kasta oo meel kasta oo aad ku hayso bogga faahfaahsan ee sheygaaga. Qaab-dhismeedka asaasiga ah ee bogga wax soo-saarka ah ee aanu ku-talagalnay marwalba wuxuu ka kooban yahay hal isku mid ah waxyaabaha muhiimka ah. Iyadoo la tixgelinayo in loola jeedo in lagu daro keywords keywords bartilmaameedka - ugu horeysay iyo ugu horreyn - halkan waa waxa aad u baahan tahay fiiro gaar ah halkaas.
Diiwaangelinta Title ee ku saabsan mawduuca ugu muhiimsan ee heshiiska iibka.
Meelaha Calaamadaha ah ee bixiya sharaxaadda alaabta nadiif ah oo cad oo isticmaalaya talooyinka.
Sharaxaadaha Waxyaalaha dhabta ah ee u taagan qaabka faahfaahsan ee Meelaha Maqalka.
Sawirada muhiimka ah ee taageeraya alaab kasta si ay u bixiyaan sheeko wax ku ool ah oo loogu talagalay dukaamanka nool.
Talooyin habboon oo loogu talagalay Amazon.com Horumarinta Heerka
Looma baahna in la sheego cinwaanka liiskaaga wax soo saarka ayaa laga yaabaa inay tahay meesha ugu muhiimsan halkaas oo u baahan in la geliyo ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan ee suurtogalka ah. Xasuusnow, si kastaba ha ahaatee, waa inaanad marnaba laheyn liistada alaabooyinkaaga ee kuxusan oo ku xiran ereyada muhiimka ah. Markaa, si aad u hubiso in alaabta aad haysatid ay macno samaynayso, samee laba-jeeg si aad u hesho wax walba oo ku xusan shuruudaha soo socda:
Ku dar ereyada muhiimka ah ee ugu dhow dhow bilowshaha amarka.
Dhererka alaabta ee alaabta la isticmaalo waxaa loo oggol yahay inay soo qaadato 200 oo xaraf..Saas oo kali ah adiga kaliya si aad u go'aamiso inta uu le'eg yahay.
Warqad kasta oo ugu horeysa ee erey kasta oo magac ah waa in had iyo jeer la badiyaa.
Tirooyinka waa in lagu dhajiyaa tirooyinka (tusaale ahaan, 100 waxay noqon doontaa mid ganaax ah, boqolkiiba boqolna ma ahan).
Inkastoo xogta heerka caadiga ah ee cabbiraadda shixnadaha badanaaba ay timaaddo, qiimaha badeecadu waa inaan marnaba lagama maarmaan ahayn (dabcan, haddii aysan aheyn mid ku haboon oo aan loo baahnayn).
Ku dhawaad ​​isku mid ayaa ku saabsan tilmaamida midabka - looma baahna in lagu qoro dhammaan alaabooyinka, oo kaliya alaabooyinkaas.
Waxaa laga yaabaa inaad horayba u taqaanay, laakiin waxaan rabaa inaan qoro liis kooban oo soo jeedin ah - ugu yaraan si loo dhamaystiro dhamaystirka. Marka, marka aad gujiso liisaska wax soo saarka ee ku yaala suuqa xaafadda - oo si toos ah ayaad ugu dhejisey qaybta bogga internetka leh dhibcaha xabadaha. Iyada oo ku saleysan Amazon.com tilmaamayaasha rikoodhada, fiiro gaar ah u yeelo talooyinka soo socda markaad dooranayso qodobada calaamadaha ah ee ku haboon:
Liiska dhibcaha qodobka waa in la dhisaa kuwo leh faa'iido badan xogta dhabta ah iyo wax kale.
Qodobada kale ee sharraxaadda ah waxaa ka mid ahaa WAA INUU YAHAY MUWAADIN KA AH MUWAADIN KALA GAAR AH
Waxaad ku qortaa sifooyinka wax soo saarka iyo faa'iidooyinka muhiimka ah ee qaab gaaban, nadiif ah oo asturan.
Qeexitaanka iyo Sawirada Qalabyada
Ku dhowaad wax kasta oo ku saabsan sharaxaadda badeecada iyo isugeynta muuqaalku waa is-sharax. Taasi waa sababta aan kugula soo koobi doono kooban oo kooban oo ku saabsan natiijooyinka ugu cakiran iyo WAA INAAD-waxay leeyihiin qodobbo muhiim ah:
Tafsiirka Product - hodan ku leh ereyada muhiimka ah, noqo mid gaar ah. Iyaga oo la hadlaya dhibcaha ugu weyn ee macaamiisha, sharaxaadda alaabta ugu habboon waa in ay daboosho dhammaan xogta ku qoran liistada oo dhan.
Sawirada alaabta - xaddidaadda keliya ayaa ah in Amazon ay u ogolaato walxo kasta oo liis gareynaya in la geliyo wax aan ka badneyn 9 sawir oo dheeraad ah. Malaha waa wax maskaxeed, laakiin waxaan weli ku talinayaa inaan tixgeliyo gaar ahaan baakooyinka, hab nololeedka iyo weliba isticmaalka walxaha isticmaalka maalinlaha ee maalin walba - oo la sameeyo Source .